ExMplayer: Mpampiasa haino aman-jery miaraka amin'ny fanohanana 3D, Facebook ary maro hafa | Avy amin'ny Linux
Manandrana miala sasatra kely amin'ny safidy malaza indrindra (VLC, SMPlayer, sns ..) Hitako tao amin'ny AUR ny haino aman-jery multimedia izay tsy milalao Audio sy Video fotsiny, fa manana fiasa mahaliana hafa koa.
ExMplayer Izany dia gửi for MPLayer fa miaraka amin'ny fahaizany manokana fa voasoratra amin'ny Qt izy ary maro karazana.
raha toa, SMPlayer koa, fa ny mahasamihafa azy dia manome antsika ny safidy ny ExMplayer jereo ny sarimihetsika amin'ny 3D, raha mbola mamela izany ny horonan-tsary, amin'ny fomba isan-karazany.
Azontsika atao ny manantona ny horonan-tsary, manova ny vahaolana, mampitombo ny kalitaony, manova ny FPS, ary maka sary ny zavatra lalaovintsika.
Tsy izany ihany fa ho an'ny ankamaroan'ny Geeks dia manana ny ExMplayer sivana ho an'ny horonan-tsary, ny sasany amin'izy ireo dia tena WTF? toy ny, ohatra, ilay iray mamela antsika hahita izay lalaovintsika ao amin'ny Matrix:
Ho fanampin'izany, azontsika atao ny manokatra ny fisie ataontsika amin'ny alàlan'ny safidy iray izay mampiseho amintsika ny lahatahiry eo an-toerana any amin'ny tapany ambony amin'ny mpilalao, misy ny vokatra mitovy amin'ny an'ny Famehezana de iTunes:
Mbola tsy ampy ve? Eny, ity mpilalao ity dia manana endrika tsara maro hafa, toy ny mety esory amin'ny horonan-tsary ny feo o avadiho ho MP3, OGG, AAC ary karazana endrika malaza hafa.
Izy io koa dia manana fitaovana antsoina hoe MediaCutter, izay ahafahantsika manapaka feo sy horonan-tsary ary amin'izany fomba izany dia manaova asa fanovana amin'ny fomba tsotra, na mamorona ny pataloha fohy Tonga, Horonantsary 6 segondra nampalaza an'i Twitter (afaka mahita ohatra vitsivitsy isika ao amin'ny TheBestVine).
Safidy mahaliana iray hafa an'ity mpilalao ity ny antsoin'izy ireo SeekView, izany hoe, toy ny mpamokatra ny YouTube, Vimeo, sns, ExMplayer dia mampiseho amintsika sombintsombin'ny horonantsary rehefa manetsika ny kursor amin'ny bara fanaraha-maso.
mampiasa opensubtitles.org, ExMplayer dia mamela antsika hampakatra, hisintona ary hikaroka dikanteny amin'ny fiteny maro, mba hahafahantsika manadino ny hitady azy ireo amin'ny Internet.
Azontsika atao koa ny mizara amin'ny Facebook mivantana (miaraka amin'ny tsindry bokotra) izay hitantsika na henontsika.
En ArchLinux azo apetraka avy amin'ny AURs:
Fa rehefa mihazakazaka azy aho dia mahazo izao lesoka manaraka izao:
Debug: Manamarina ny binary MPlayer ... Debug: Manomboka ny dingan'ny mplayer ... Fampitandremana: QMetaObject :: connectSlotsByName: Tsy misy signal mifandraika amin'ny on_sliderSeekFullSc_actionTriggered (int) Debug: "/ tmp" Debug: Config path: "/ home / elav /. config / exmplayer "Debug: manamarina ny fehin-tànana fohy an'ny mpampiasa ... Debug diso: Mampiditra rakitra hitsin-dàlana:" /etc/exmplayer/sc_default.xml "Debug: Manamarina fatorana tapaka fohy ... Type System "1" Debug: QDBusError ("org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod", "Tsy misy fomba toy izany 'Inhibit' ao amin'ny interface 'org.freedesktop.ScreenSaver' at object path '/ ScreenSaver' (sonia 'susu') ") Debug: w_width: 600, w_height: 375 Debug: w: 600, h: 375 Fanitsakitsahana segment (novokarina` core ')
Saingy rehefa mamaha ny olana aho dia afaka mametraka azy amin'ny distro miorina Ubuntu miaraka amin'ny baiko:
sudo add-apt-repository ppa: exmplayer-dev / exmplayer sudo apt-get fanavaozana sudo apt-get install exmplayer
Na dia tsy mpilalao mahafinaritra aza io estetika io, azontsika atao ny manitsy ny fisehoany amin'ny alàlan'ny fananana Look & Feel toy ny Gtk +, Aqua, Cleanlooks, Windows 95… Sns.
Mety manana antsipiriany bebe kokoa aho, fa hatreto dia izao no zavatra hitako sy hitako rehefa mampiasa ExMplayer. Amin'izao fotoana izao dia manana azy ho mpilalao horonantsary default aho 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » ExMplayer: Multimedia mpilalao miaraka amin'ny fanohanana 3D, Facebook ary maro hafa
Matetika aho mampiasa smplayer mihoatra ny vlc, fa ilay asehonao dia mitondra endrika tena mahaliana, indrindra; ny fampidinana dikanteny, raha ny sivana amin'ny horonan-tsary, ny fomban'ny Matrix dia mora ampiasaina hamoronana valin-drakitra.
Ny tsy mazava amiko dia raha ny hadisoana miseho mampiala ny famonoana exmplayer, sa fampitandremana fotsiny.
Na ny fampidinana dikanteny sy ny sivana video dia samy manana SMPlayer.
Misaotra noho ny tendrony, saika hametraka azy io indrindra aho ho an'ny olana misy dikanteny, hizaha ny mpilalao sarimihetsika bebe kokoa aho.
Mampiasa mpv aho
Mahazo izany lesoka izany ihany aho amin'ny Kubuntu.
alebil dia hoy izy:
Mamaly amin'ny alebil
Nametraka azy tao amin'ny ElementaryOS aho
Raha mbola afaka mampiasa azy aho na tsia, dia te hahalala ny fomba fiasan'ny MediaCutter. Misafidy fotoana fanombohana sy fotoana famaranana ve ianao ary manapaka irery ilay horonantsary? Sa tsy maintsy manao toy ny ao amin'ny VLC ianao, kitiho ny bokotra firaketana ary andraso ny fotoana tianao hanajanonana azy?
Mamaly ny tenako aho: voafaritra ny ora sy ny ora manomboka, na ny faharetana. Raha miasa araka ny tokony izy izy ary tsy manana andraikitra SMPlayer sasany (heveriko fa tsy, mampiasa Mplayer iray ihany) dia azonao ampiasaina ho toy ny mpilalao horonantsary default. Tsy haiko raha manana lohahevitra Oxygen io fa tiako.
Tokony hiara-miasa amin'ny tranomboky taloha izany
Hita fa tsy mandeha ny Kubuntu dia esoriko izany. Mahamenatra…: 0 (
Manome "fahitana" vaovao anao ve ny fijerena ny lahatsarin'i Katy amin'ny 3D? 😀
Ary ao amin'ny gtk ve izany sa qt?
Ay Pandev !! Raha namaky tsara ny lahatsoratra ianao dia ho hitanao .. Fa mijanonà, ho tahirizako ny asa: Qt
Matetika aho no mamaky sy mamaky ireo teny amin'ny saro-kenatra: p
ah! ny hafetsena zazavavy mainty taloha! izany no tsy ampiasako, fa tsy misy mamaky anao.
Google dia toy ny Pandev, izany no antony tsy maintsy hampiasanao Bold 😀
Tena milay ity mpilalao horonantsary ity. Tena mitovy amin'ny VLC.
rvm dia hoy izy:
Kambana mpilalao smplayer hafa io. Na farafaharatsiny mampiasa ny kaody smplayer.
Leo ny forks efa be aho.
Valio ny rvm
Misaotra ny SMPlayer (sy ny SMTube). Ahoana ny fahitanao ny fampifangaroana ny topi-maso ao amin'ny tsipika ora?
Mampiasa ny SMPlayer aho hilalao horonantsary Youtube ary tena tsara ho ahy izany.
Raha misy olona liana, miaraka amina fanalahidy mifangaro (tena fihetsika totozy no ampiasaiko) amin'ny rohy na horonantsary YouTube dia azonao atao ny mandray ny adiresin'ilay horonantsary ary manokatra azy ao amin'ny SMPlayer, miaraka amin'ireo tombony azo avy amin'izany. Mazava ho azy, ny add-on Firefox izay hahavita azy ho azy dia tena tsara, saingy tsy hitako io.
manandrana azy Misaotra :) Extundelete
Ny pôrnôgrafia 3D no tsara indrindra 😉
Mahaliana!, Handinika aho!
Avy amin'ny Android.net: Teraka ny tetikasa vaovao